Fiara-mason-tsolika fiara & ozinina marika marika fiara - mpanamboatra sy mpamatsy marika an'habakabaka ao Shina
Niraikitra tao amin'ny "ranomasina fiara" ve ianao ary manontany tena ny amin'ny dikan'ireo takelaka fitaterana fiara? Ny marika vy amin'ny fiara dia hita eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ny tandindona samy hafa dia midika ho soatoavina sy fomban-drazana. Rehefa ianao no tompona fiara, ahoana no hitazomana azy eny ivelan'ny varavarana nefa tsy miloko ny loko dia fanontaniana? Tena nanoro hevitra an'io fitaovana enamel mafy io izahay, izay antsoina koa hoe cloisonné. Izy io dia fitaovana vovoka iray karazana izay mitazona ny loko marika maharitra tsy misy farany. Ankoatry ny enamel mafy, ny ozininay koa dia manana enamel sarotra, enamel malefaka, pirinty hamita ny antsipirian'ny logo famantarana ny fiara. Samy manana asa tanana miavaka izy ireo, tongasoa eto amin'ny ozinay mba hizara anay ny safidinao amin'ny fomba tsara indrindra hanamboarana ny karatra fiaran-dalanao. Smampiavaka: ● Fanodinana: Fanomanana asa-kanto, sokitra bobongolo, fanamboarana loko, fandoroana cloisonné, fitoraham-bato, fanangonana, fametahana takelaka, fizahana kalitao ● Endri-javatra: Toerana maharitra, mahazaka hafanana, porofon-drano, solika ary menaka fanasana anti-fiara ● Fampiharana: ravaky ny fiara, fahatsiarovana na fanomezana ho an'ny orinasan'ny fikambanana.